Nduku Europe 2021 - Organizationtù Na-eweta Nkwụsị - Potatoes News
A kagbuola nduku Europe 2021. A ga-eme mmemme nduku na 1 na 2 Septemba na ọnọdụ nke Mahadum Wageningen & Cultivation Open Open na Lelystad.
Onye nhazi nke DLG kpebiri ime nke a n'ihi enweghị nchekwube gbasara usoro ndị gbara ya gburugburu okpueze . A na-atụ anya na ihe omume ụbọchị abụọ nke nwere ihe ngosi ime ụlọ na n'èzí ga-adọta ihe karịrị ndị ọbịa 16,000, 5,000 n'ime ha si mba ọzọ. Na mbipụta ndị gara aga nke Nduku Europe na Netherlands, ndị si mba ọzọ bịara si mba karịrị iri ise.
Ihe omume a na-eme otu ugboro kwa afọ anọ na Netherlands. Emere mkpebi ịkagbu ya mgbe mkparịta ụka miri emi dị n'etiti onye nhazi DLG Benelux na ndị ngosi. "Anyị na-akwa ụta nke ukwuu na PotatoEurope 2021 enweghị ike ịme dị ka atụmatụ, n'agbanyeghị nkwadebe ndị ọkachamara zuru oke na itinye aka na ahịa," ka Kuno Jacobs, onye isi njikwa nke DLG Benelux na-ekwu.
Ejighị ihe n'aka gburugburu corona
“N’ụzọ dị mwute, n’enyemaka na-aga n’ihu na Netherlands maka ọnọdụ zuru oke gbara corona na enweghị nnabata nnabata na mmachi a na-enye, ọnọdụ achọrọ maka ijide PotatoEurope 2021 ezughi. N'ihi ya, na mkparịta ụka chiri anya na ndị gosipụtara ya, kpebiri ịkagbu ihe omume ahụ, "DLG pịa ntọhapụ na-ekwu.
'Na June akara niile na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na ọnọdụ na Netherlands yiri ka ọ na-etolite nke ọma. Nke a mere ka ewepụ ọtụtụ mmachi. Na nwute, nke a edugaghị na mmetụta achọrọ ', ka Jacobs na-agbakwụnye.
Nduku Europe ga-ewere ọnọdụ na ọnọdụ nke Mahadum Wageningen & Nyocha Open Cultivation na Lelystad. Nduku Europe na Netherlands bụ ndị DLG Benelux haziri. Ihe omume a nwere ime ụlọ na ime ụlọ ngosi, ihe ubi na owuwe ihe ubi.
Organisatie zet streep ụzọ Potato Europe 2021
/ ihe omume-na-ngosi /
Tags: DLGNetherlandsụbọchị ngosi ndukuNduku EuropeWUR
Nduku - Site na Osisi ozuzu Innovation
UNIKA na Kiel University: akwụkwọ nchekwa akụrụngwa na-enye aka na akuku nduku